पोखराकि शुशिला कार्की ‘रहस्यमय मृत्यु’ प्रकरणः फोन रेकर्ड बाहिरिएपछि स्थानियको हंगामा, घटनामा नया मोड - भिडियो सहित - Khabar Time
in अपराध, समाचार
पोखरा । तिन महिना अघि पोखरा चाउथेकी शुशिला कार्कीको ‘रहस्यमय मृत्यु’ प्रकरण अहिले आएर फेरी तातेको छ । शुशिलाका माइती पक्षको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा मृतक शुशिलाकै श्रीमान राम बहादुर कार्की र राम बहादुर कार्कीकी प्रेमिका भनिएकी देवी रानाभाट लाई पक्राउ गरी मुद्धा चलाएको थियो ।घटनाको तिन महिना पछी उच्च अदालतले देवी रानाभाटलाई थुना मुक्त गरेपछी देवी रानाभाटको मोबाइलको कल रेकर्ड बाहिरीएको छ ।
फोन रेकर्ड स्थानियको मोबाइल–मोबाइलमा पुगेपछी स्थानियहरु थप आक्रोशित बनेका छन । देवीले रामबहादुर कार्की सहित बिभिन्न मानिसहरु संग मोबाइलमा गरेको कुराकानीले घटनामा देवीको पनि संलग्नता रहेको आरोप स्थानियले लगाएका छन । यद्यपी देवी उच्च अदालतको आदेशले थुनामुक्त भैसकेकी छिन । रामबहादुर थुनामै छन ।
कल रेकर्डमा शुशिलाको हत्या भएको वा कसले हत्या ग¥यो भन्ने कुराको कुनै कुराकानी भने छैन । तर देवी र रामबहादुर अनि अर्का एक पुरुष संग भएको गोप्य कुराकानीले घटनालाई थप पेचिलो बनाएको छ । गण्डकी टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम गण्डकी छड्केको यो हप्ताको श्रृखला यसै बिषय संग सम्बन्धीत छ । के छ त कल रेकर्डमा ? कल रेकर्डले कसरी ल्यायो घटनामा नया मोड ? के भन्छीन आरोपी देवी रानाभाट ? कृपया तलको पुरा कार्यक्रम अवस्य हेर्नुहाेला ।
सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्षको घरमै यसरी बम बिस्फोट भएपछि...
काठमाडौंका थप यी ८ वटा चोकहरूमा ट्राफिक लाइट बालिँदै...